Ningbo Hilectro Power Technology Co., Ltd waa ganacsiga ugu weyn ee Haitian Drive, kaas oo ku takhasusay soo saarta forklift korontada, stacker, gaadiidka dhulka, golfcart iwm Shirkadda waxaa u hoggaansanaayeen falsafadda ah Haitian Group "tamarta Tayada Sare, oolnimada sare iyo badbaadiyo ", iyo waxs bixiya waxyaabaha fasalka ugu fiican si ay macaamiisha ku.
Shirkadda waxa uu ku yaalaa Zone Warshadaha ee Beilun taas oo ah mid ka mid ah dekedaha ugu weyn adduunka oo dhan. degaanka ee warshadaha waxay daboolaysaa 110 mitir oo laba jibbaaran thous. Qalabaysan khadadka wax soo saarka badan kuwaas oo awooda sannadlaha ah waa in ka badan 10 nooc oo thous forklift, shirkadda ayaa xarunta imtixaanka sare waqti isku mid ah.
Ururinta la kormeerayaasha xirfadeed, shirkadda uu leeyahay R & D kooxda dhamaadka sare. By isku waayo-aragnimo ah gudaha iyo dibada, kooxda waxaa hagaajinta tayada forklift si joogto ah, oo isku dayaya in ay la gashay kaalinta ee qeybiyeyaasha top in industry ee.